Igumbi negumbi lokugezela langasese (Ukuqashwa Kwesikhathi Eside) - I-Airbnb
Igumbi negumbi lokugezela langasese (Ukuqashwa Kwesikhathi Eside)
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Certified Superhost - Romer
U-Certified Superhost - Romer Ungumbungazi ovelele
Ababungazi bagonyelwe ngokuphelele i-COVID-19. Lolu hlu olwezindawo zokuhlala zesikhathi eside kuphela. Indawo yakho yokuhlala yesikhathi eside (izinsuku ezingama-31 noma ngaphezulu) ihlanganisa:
★Igumbi lokulala le-Pivate kanye negumbi lokugezela eligcwele
★Igumbi lokuphumula elingaphandle elizimele
★Indawo yokupaka yamahhala
★Incazelo ephezulu kamabonakude
★Ukusetshenziswa kwewasha/umshini wokomisa
★ Indawo ephephile enezokuphepha ezizimele
★Izinsiza eziphezulu ezikufanele futhi uzilindele
★ Imvume ekhishwe yiDolobha laseSacramento
★Osokhaya Bokuqala Abaqinisekisiwe Be-Airbnb e-Sacramento
Lolu hlu olwezindawo zokuhlala zesikhathi eside kuphela. Indawo yakho yokuhlala yesikhathi eside (izinsuku ezingama-30 noma ngaphezulu) ihlanganisa:
★ Isilinganiso esihle esingu-100% esivela kubavakashi abangaphezu kuka-400 emhlabeni wonke.
Ukuze sivikele izivakashi zethu eziyigugu kanye nathi, sisebenzise lezi zinyathelo zezempilo nezokuphepha ezilandelayo:
★Isibulala-magciwane siyasula noma sifafaze
★Nikeza isicoci sezandla esisha ezivakashini.
★Ukutholakala kwama-sanitizer esandla kuyo yonke indawo.
★Ukuhlanza njalo isibulala magciwane emakamelweni, imicrowave, isiqandisi, amaknobhu eminyango, amaswishi, amarimothi, njll.
★Zijwayeze ukuqhelelana nomphakathi.
★Amathawula ephepha alahlwayo
★Isihlanzi sezindawo eziningi
★I-antibacterial hand sanitizer
★Insipho yesandla eyengeziwe
Lolu hlu olwezindawo zokuhlala zesikhathi eside kuphela. Indawo yakho yokuhlala yesikhathi eside (izinsuku ezingama-31 noma ngaphezulu) ihlanganisa:
Ibungazwe ngu-Certified Superhost - Romer
Sinikeza ubumfihlo obuphelele kuzo zonke izihambeli zethu. Sikhona lapho sidingeka futhi singabonakali lapho singadingeki.
★Isibulala-magciwane i-Lysol fafaza izivakashi.
★Ukuhlanza njalo isibulala-magciwane emakamelweni, i-microwave, ifriji, amaknobho eminyango, amaswishi, amarimothi, njll.
Ukuze sivikele izivakashi zethu eziyigugu kany…
UCertified Superhost - Romer Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: City of Sacramento BOT No. 1034958